Shir balaadhan oo saxafiyiinta Sweden ay kaga hadleen dhibaatada ka jirta Ogadenya
Shir balaadhan oo saxafiyiinta Sweden ay kaga hadleen dhibaatada ka jirta Ogadenya	Written by Administrator	Thursday, 08 December 2011 17:28	Waxaa shalay oo ay taarikhdu ku beegnayd 7 december 2011 ka furmay caasimada 2-aad ee dalka Sweden Gothenburg kulan aad u baladhan oo ay soo qabanqaabiyeen ururo Swidhish ah oo isugu jiray Suxufiyiinta dalka & Saxafiyiinta aanan xuduuda lahayn. Kulanka ayay ku casuumeen ururo kale ay ka mid ahaayeen Ururada xuquuqul insaanka, UN-ta & ururka dhalinta OYSU Sweden.
Waxaa ugu horeyntiiba shirka furay Urbau Löfquist oo ah madaxa ugu sareeya Suxufiyiinta aanan xuduuda lahayn sharaxaadna ka bixiyay sababta ay shirkan u qabteen inuu yahay inuu caalamka ogaado dhibatada ba’an ee arxan darada ah ee ka jirta dalka Ogadenia una bahan in wax laga qabto. Waxuu kaloo cadeeyay 2-da Suxufi ee u dhashay wadanka Sweden ee ilaa hada u xiran xukuumada Itobiya sababta ugu weyn inay tahay Itobiya inaysan diyaar u ahayn in arimaha & falalka foosha xun ee ay samaynayso aanan waxba laga ogaanin, Asagoo hadalkiisa sii wato ayuu Urbau yidhi Waa sababtaas waxa ay suxufiyiinta ugu tilmaamayaan argagixiso, ujeeda Itoobiya ayaa ah buu yidhi inay cabsi galiso Suxufiyiinta oo aysan suxufiyiin dambe isku dayin hase ahaatee wax ay qariso ma ay hayso Itobiya sidaasna udayn maayaan baadhitaanada ay wadaan Suxufiyiinta waxaanana diyaar unahay inaan soo saarno intaas in kabadan.
Kadib waxaa lagusoo dhaweeyay codbaahiyaha Marwa Fawsiya Abdirahman oo ah Xoghayaha OYSU Sweden faraca Gothenburg oo ayadana warbixin aad u dheer ka bixisay xaalada dhabta ah ee Ogadenia. Fawsiya ayaa u cadaysay in shacabka reer Ogadenia xasuuqa lagu hayo uu yahay mid aanan loo aaba yeelin dawlada Itobiyana aysan shacbaka u fiirinin caruur & waayeel toona oo isku si loogumaado, waxayna kusoo bandhigtay goobtii sawiro naxdin leh misna dhamaan bulshadii madasha isugu timid ay ka wada qiiroodeen.
Waxaa sidoo kale warbixin meela badan taabanaysay kasoo jeediyay goobtii shirka uuka dhacayay Mudane Mohamed Mo’alin oo ah masuul ka tirsan OYSU faraca Gothenborg, Warbixin dheer kadib ayuu Mohamed soo bandhigay filmkii Silent Cry ee aduunka dhan caanka ka ahaa, Waxuu sidoo kale dad weynihii uu usheegay filmka qaybtiisii labaadna inuu iman doono goor dhaw kuna arki doontaan dhibaatooyin ka daran kuwan waa siduu hadalka u dhigay Mohamed.
Gabagadii shirka ayaa waxaa soo xidhay Suxufi Soomaliyeed oo lagu magacaabo Ali Yasin Gurbe oo asagana xaqiijiyay dhibaatada Ogadenia ka jirta inay tahay mid aanan la qarin karin cadeeyayna inay jiraan marxalada badan oo uu goob joog ka ahaa, Sidoo kale waxuu wacyi galin baladhan usoo jeediyay bulshadii soomaliyeed ee madasha isugu timid kuna dhiira galiyay inay isgarab taagaan walaalahooda Somaliyeed ee dhibaataysan walina ku hoos jirta gumaysiga. Asagana waxuu balan qaaday inuu mar walba u tagan yahay taageerida shacabka dulman ee walaalihiisa ah.
Dhagaysi & afkaaro la is weydarsaday kadib munaasabadii shirka ayaa kusoo gabagaboobay si habsami ah oo guul la taaban kara lagasoo gaadhay.
Ilwad Ali Stockholm/Sweden
Today1713Yesterday2375This week10318Last week18365This month28683Last month139282All days5162837We have: 18 guests, 2 bots onlineYour IP: 54.243.21.129 , Today: Dec 12, 2013Visitors Counter